အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ -
ဆီးချိုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစား (၁)နဲ့ အမျိုးအစား (၂)ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်။ အမျိုးအစား (၁)က ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သိရပြီး၊ အမျိုးအစား (၂) ကတော့ အသက်ကြီးမှ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို သိရင် ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆုံးထိဖတ်ရှု့ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Diabetes type2ဖြစ်ဖို့အတွက် အကြီ;မားဆုံး ရန်သူကတော့ အဝလွန်ခြင်းပါပဲ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အစားအသောက်တွေပေါတယ်၊ အရသာရှိအောင် အဆီအစိမ့်တွေနဲ့ အချိုများစွာကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်ကြတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လူတွေဟာ လွယ်ကြတယ်။ အစားအသောက်မှာ ပါဝင်တဲ့ သကြား၊ ဆား၊ အဆီတွေကို သေချာသတိထားပြီးစားဖို့လိုပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့သူတွေ အလေးချိန်ကျဖို့အတွက်အစားအသောက်နေထိုင်မှု အတွက်လဲ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်တွေရှိနေပြီမို့ ကျန်းမာလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင် နေထိုင်ကြပါနော်။
အပေါ်က အဝလွန်ခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ အရာပေါ့။ အစားတော့ အများကြီးမစားပါဘူး. . သို့သော်အထိုင်များရင်တော့ ဗိုက်ကလေး အရင်
ထွက်လာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ကျတော်၊ ကျမတို့ကတော့ အလုပ်များတဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းသီးသန့်လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိပါဘူးဆိုရင် ကိုယ်နေ့စဉ်လုပ်
နေကျ အပြုအမူတချို့ကို လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – ဓာတ်လှေကားစီးမဲ့ အစား. .လှေကားတက်ပေးတာ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် (၁)မှတ်တိုင်လောက် ကြိုဆင်းပြီး အလုပ်ကို လမ်းလျှောက်‌ပေးတာ စတာတွေက ကျမတို့အချိန်တွေထဲက 10mins လောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ရနေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါ။
4)သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊ သွေးပေါင်ချိန်တက်သူ၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များသူ
ဒီအချက်တွေက ဆီးချိုနဲ့ ဆွေမျိုးတွေလို့ ပြောလို့ရအောင် တပါးတည်းတွဲပါနေတတ်တဲ့ အရာတွေပါ။ အဲ့တော့သွေးတိုးသမားတွေက သွေးကျဆေးသောက်တဲ့ အပြင် ရံဖန်ရံခါ ဆီးချိုစစ်ပေးတာ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် မေ‌မေတို့ ‌ဆီးချိုဖြစ်ကြတယ်. . ကလေးမွေးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ ဒီလို အမျိုးသမီးတွေကိုလဲ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်တဲ့ risk တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်တွက်ပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးလဲ 6လ တခါလောက် ဆီးချိုစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဆီးချိုဆိုတာ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်မိဘ၊ ဆွေမျိုး‌တွေမှာ ဆီးချိုရှိနေရင်တော့ ကိုယ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဆီးချိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆီးချိုစစ်ကို စစ်ရမဲ့ အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီ။
တချို့ဦးလေးတွေ ၊ အဒေါ်တွေ 60 လောက်ထိ ကောင်းနေပြီး ၊60 ကျော်မှာ ဆီးချိုဖြစ်တာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ အားနည်းလာတာကြောင့်ပါ။ အားနည်းတဲ့ထဲမှာ အင်ဆူလင်ကို အဓိကထုတ်ပေးတဲ့ မုန့်ချိုအိတ်ပါ နေလို့ပါ။ အင်ဆူလင်အားနည်းရင်သွေးအချိုဓာတ် မထိန်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်ကြီးလာပြီဆို နှစ်စဉ် Medical checkup လုပ်သင့်ပါတယ်။
Apr 27, 2021 Health Tips, Pre-existing Disease
ကလေးငယ်လေးတွေ ဖျားပြီးတက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??